नेकपाको कार्यविभाजन : जिल्ला इञ्चार्ज पोलिटब्यूरो सदस्य !::Online News Portal from State No. 4
नेकपाको कार्यविभाजन : जिल्ला इञ्चार्ज पोलिटब्यूरो सदस्य !
प्रदेश कमिटीमा पूर्व एमाले ५५ र पूर्व माओवादी ४५ प्रतिशतको भागबण्डा
काठमाडौं, ८ कात्तिक – कर्णाली र प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य ५ प्रदेशका कमिटीमा औषतमा ५५/४५ को अनुपातमा भागबण्डा गर्दै नेकपाका सातै प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिइने भएको छ । केन्द्रीय सचिवालयको विहीबार बसेको बैठकले प्रदेश कमिटी र केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन टुंगो लगाउन सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल र महासचिव बिष्णु पौडेललाई जिम्मा लगाएको छ ।
नेकपा स्रोतका अनुसार प्रदेश नम्बर २ र कर्णालीमा तत्कालीन एमाले र माओवादीको सदस्य संख्या लगभग बराबर हुने भएको छ । अन्य प्रदेशमा भने पूर्वएमाले करिब ५५ प्रतिशतभन्दा माथि हुनेछ भने पूर्वमाओवादीबाट ४० देखि ४५ प्रतिशत सदस्य हुनेछन् । यसअघि गठित कार्यदलले सिफारिस गरेका नाम र संख्यालाई नवगठित प्रदेश कमिटीका चार सदस्यीय पदाधिकारीले छलफल गरी सचिवालयलाई बुझाउने क्रम जारी छ । कतिपय प्रदेशका कार्यदलले यसअघि कमिटीमा रहने सदस्यहरुको नाम नै टुंगो लगाउन सकेका थिएनन् ।
त्यस्तै प्रदेेश ३ मा २१७ सदस्यीय कमिटी बन्दैछ । जसमा पूर्वएमाले ११७ र पूर्वमाओवादी सदस्य रहने तय भएको छ । प्रदेश कमिटीका सदस्यहरुको पनि नाम सिफारिस भइसकेको छ । प्रदेश इञ्चार्जमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र सहइन्चार्ज हितबहादुर तामाङ छन् भने अध्यक्षमा नारायण दाहाल र सचिवमा आनन्द पोखरेल छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा १८७ सदस्यीय कमिटी बन्ने भएको छ । जसमा पूर्वएमाले ९९ र पूर्वमाओवादी ८८ जना सदस्य रहनेछन् । यहाँ प्रदेश इञ्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सहइञ्चार्ज खगराज अधिकारी चयन भइसकेका छन् । गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षमा हितराज पाण्डे र सचिव गोविन्दवहादुर नेपाली छन् । प्रदेश ५ मा २०३ सदस्यीय कमिटी बन्ने भएको छ । यसमा पूर्वएमालेका १०६ र पूर्वमाओवादीका ९७ सदस्य रहने गरी टुंगो लागेको स्रोतको भनाइ छ । प्रदेश इञ्चार्जमा शंकर पोखरेल र सहइञ्चार्ज दलबहादुर राना चयन भइसकेका छन् । प्रदेश अध्यक्षमा ओनसरी घर्ती र सचिवमा जगप्रसाद शर्मा छन् ।
त्यस्तै कणर्ाली प्रदेश कमिटी १७५ सदस्यीय हुनेछ, जसमा पूर्वमाओवादीबाट ८८ र पूर्वएमालेबाट ८७ सदस्य रहनेछन् । यो प्रदेशको इञ्चार्ज जनार्दन शर्मा, सहइञ्चार्ज यमलाल कँडेल चयन भइसकेका छन् । प्रदेश अध्यक्षमा गोरखबहादुर बोगटी र सचिवमा मायाप्रसाद शर्मा छन् । सुदूरपश्चिममा १८३ सदस्यीय प्रदेश कमिटी बन्ने भएको छ, जसमा पूर्वएमालेबाट १०३ र पूर्वमाओवादीबाट ८० जना सदस्य रहनेछन् । यो प्रदेशको इञ्चार्जमा भीम रावल र सहइञ्चार्ज लक्ष्मी जोशी चयन भइसकेका छन् । अध्यक्षमा कर्णबहादुर थापा र सचिवमा नेपालु चौधरी छन् ।
थप संख्या बरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यहरुबाट ल्याइने भएको छ । स्रोतका अनुसार प्रदेश कमिटी अध्यक्ष र सचिवहरुलाई पोलिटब्यूरो सदस्य बनाइने सम्भावना छ । ७७ जिल्ला इञ्चार्ज पोलिटब्यूरो सदस्यहरुबाट पठाउने सम्भावना रहेकाले प्रदेश पदाधिकारीहरुलाई पोलिटब्यूरो सदस्य बनाउनुपर्ने भएको हो । स्थायी कमिटी सदस्यहरु प्रदेश इञ्चार्ज भएकाले जिल्ला इञ्चार्ज पोलिटब्यूरो सदस्यहरुलाई बनाउने र महानगर तथा कतिपय राजनीतिक महत्वका स्थानीय तहमा केन्द्रीय सदस्यलाई इञ्चार्ज बनाउने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो । केन्द्रीय सदस्यहरुलाई भूगोलमा खटाउन यो योजना ल्याइएको हो ।